သေဘေး စက်ကွင်း မှ မသေဘဲ လွတ်မြောက် လာ သူ (သို့မဟုတ်) သေရွာပြန် နိုင်လူ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / သေဘေး စက်ကွင်း မှ မသေဘဲ လွတ်မြောက် လာ သူ (သို့မဟုတ်) သေရွာပြန် နိုင်လူ
အနုပညာလောကမှာ နိုင်လူ လို့ပြော လိုက်ရင် မသိသူ ခပ်ရှားရှား ရယ်ပါ။ လူဆိုးလူမိုက် ဗီလိန် ဇာတ်ရုပ်တွေနဲ့ လူသိများခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှု့ အခိုင်မာ ရရှိထားတဲ့ လူကြမ်းမင်းသားကြီးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်က ဒီလိုဗျ့ စစ်ကိုင်းလေးမျက်နှာ ဘုရားပွဲမှာ သီချင်းသွားဆိုတော့ စင်အောက်က ခလေးတစ်ယောက်က လက်အုပ်လေးချီ ပီးတော့ ကျနော်က ဉီးနိုင်လူရဲ့ ပရိသတ်ပါ။ အဖေ အမေတွေကလဲ ဦးနိုင်လူကို အရမ်းအားပေးကြတယ် အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပေးပါလားတဲ့။ ကျနော်ကလဲ အေးလို့ သီချင်းဆိုရင်း တန်းလန်းကြီး နဲ့ ဆိုပီးရင် လိုက်ခဲ့မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အချိန်က ည့ဆယ့်နှစ်ကျော်နေပြီ သီချင်းဆို ပီးတော့ နှစ်နာရီရှိပြီ ဘာနဲ့သွားမှာလဲမေးတော့ ဆူပါကတ် ဆိုင်ကယ် အစုတ်လေးနဲ့နှစ်ယောက် နောက်က လိုက်ရတာပေါ့ ခြေနင်းပြားကမရှိဘူး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ ပါသွားလေရော။
သူ့အိမ်ရောက်တော့ သူ့မိဘတွေ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဘာညာစကား ခဏပြောြပိး ပြန်လာခဲ့တယ် သူ့အိမ်ကလဲ သိပ်မပြည့်စုံ ရှာပါဘူး။ ပြန်လာတော့ အချိန်ကအချိန်ကောင်း ဝိုးတဝါး မှောင်မိုက်နေပြီ။ စစ်ကိုင်း GTC တံတား နာမည်ကြီးတယ်ဆိုတာ နောက်မှသိရတာ။ အဲ့GTCတံတားရှေ့မှာ စလိုးဂုန်းရှိတယ်။ အဲ့ စလိုးဂုန်းကို ကျော်လိုက်တာ ကံတ္တရာလမ်းက ကွဲပီး ထိုးထောင်နေတဲ့ သံခေါင်းတွေ ခြေထောက်ထဲ ထုတ်ချင်းပေါက်ဝင်သွားတယ်။ အာ့နဲ့ ညီလေး အကိုတော့ထိသွားပြီ မရတော့ဘူး ဆေးရုံသွားမှဖြစ်တော့မယ် ပြောတော့ ဟုတ်အကိုဆိုပီး ခဏဆင်းဆိုပီး ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဝေါခနဲထွက်ပြေးသွားတာ အမှောင်ကြီး
ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသ ဆိုတာလဲမသိ ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်နေတာလဲမသိ ပရိသတ်ကို ချစ်လို့သာ လိုက်သွားတာ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်လဲမရှိဘူး မှောက်မိုက်နေတာ
သွားကလဲမသွားနိုင် တရွတ်တိုက်ကြီး ကတ္တရာလမ်းပေါ် ဆွဲရင်း ကယ်ကြပါအုံး ကယ်ကြပါအုံး ပါးစပ်က အော်လိုက် လက်နဲ့တရွတ်ဆွဲရှေ့သွားလိုက် ခြေထောက်ကသွေးတွေကလဲ တလိမ့်လိမ့်စီးကျနေတာ ဗွက်ကိုအိုင်လို့ ခေါင်းကလဲ မူးဝေနေပြီး နောက် ၁၅ မိနစ် လောက်ဆိုသေတော့မှာ သွေးလွန်နေဆဲ လူငယ်လေးနှစ်ယောက် ဆိုင်ကယ် နဲ့ရောက်လာတယ်။ အနီးနားရောက်တော့ ဓာတ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်တယ် ဟာ့ ဦးနိုင်လူကြီးပါလားဆိုပီး ဆိုင်ကယ်ပေါ် အမြန်ဆွဲတင်ပီး ဆေးရုံကိုပို့ပေးလို့ နို့မိုဆို နောက် ၁၅ မိနစ်လောက်ဆို သွေးလွန်ပြီးသေပြီပဲ။ အဲ့လိုနဲ့ သေကံမရောက် အသက်မပျောက်ခဲ့တဲ့ ဦးနိုင်လူရဲ့ ပရိသတ်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ စိတ်ဟာ အင်မတန်လေးစားဖို့ ကောင်းလွန်းပါတယ် ဦးနိုင်လူ ပရိသတ်တွေ ရှိသေးလားဗျာ?
Previous post VPN သုံးရတာ နှေးနေ ရင်.. DATA စား နေရင်.. ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ? (အများသိအောင် ရှယ်ပေးပါအုံး …)
Next post ရှေးလူကြီးတွေ ပြောခဲ့တဲ့ သာသနာနှစ် ၂၅ဝဝကျော်လာရင် ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေ